OTP- Ururka ONLF ayaa daafaha Caalamka ka wadda shirar balaadhan oo kaga tashanayaan arrimaha Siyaasada, Midnimada ummada iyo sidii isbaddalka cusub ee Itoobiya loola jaanqaadi lahaa. Waxaana kullamadan lagu kala qabtay Dalka Itoobiya, UK, Sweden Iyo Meel kalle oo baddan. ONLF oo...
Daawo Waraysi- Aqoonyahan Faysal Rooble Iyo Cabdiraxamaan Cawaale
Ogadentoday Press- Kaddib markii aan fiiryay xaalada Guud ee Geeska Afrika loollanka u dhaxeeya Gobalka Iyo Siyaasadaha shisheeya iyo xaalada gaar ahaaneed ee Itoobiya iyo Deegaankeena waxaan ugu baaqayaa qaybaha kalla duwan ee bulshada inay si qoddo dheer ugu kuur...
Odoyaasha Iyo Shacabka Deegaanka oo soo dhaweeyay Xabad Joojinta ONLF
OTP- Odoyaasha Deegaanka ayaa si weyn soo dhaweeyay Xabad Joojinta Ururka ONLF ku dhawaaqay kaddib markay go,aamo Siyaasi ah oo si ku meel ah. Taalabadan ayaa sidoo kalle waxaa si weyn u soo dhaweeyay Dadweynaha. ONLF ayaa liiska argagaxisada ay ka qaaday Itoobiya, waxaana...
Masuuliyiin ONLF oo Addis Ababa ku wajahan!
OTP- Madaxda ONLF ayaa ku dhawaaqay go,aan ah Xabad joojin aan shuruud lahayn iyadoo taas jawaab looga dhigayo in Barlamaanka Itoobiya uu ONLF ka qaaday liiska argagaxisada Ururka ONLF una aqoon sadeen Urur Sharci ka ah Itoobiya oo xaqooda raadinaya! Waftiga ONLF oo ka koobaan...